17 Afei wɔkɔfaa Amfipoli ne Apolonia baa Tesalonika,+ faako a na Yudafo hyiadan bi wɔ no. 2 Na sɛnea Paulo taa yɛ no,+ ɔkɔɔ wɔn nkyɛn wɔ hɔ, na ɔde homeda abiɛsa ne wɔn susuw nsɛm ho fii Kyerɛwnsɛm no mu,+ 3 na ɔkyerɛkyerɛɛ mu de adanse ahorow kyerɛe sɛ na ehia sɛ Kristo hu amane+ na ɔsɔre fi awufo mu,+ na ɔkae sɛ: “Oyi ne Kristo no,+ Yesu a mereka ne ho asɛm kyerɛ mo no.” 4 Ɛno maa wɔn mu binom bɛyɛɛ gyidifo+ na wɔde wɔn ho bataa Paulo ne Silas+ ho, na Helafo dɔm kɛse bi a wɔsom Onyankopɔn ne mmea atitiriw a wɔdɔɔso pii nso yɛɛ saa. 5 Na Yudafo no ani beree,+ na wɔboaboaa nsɛmmɔnedifo bi a wɔwɔ gua so a wɔmpɛ hwee ayɛ ano maa kurow no mu yɛɛ bagyabagya.+ Na wɔtow hyɛɛ Yason+ fie so hwehwɛe sɛ wɔde wɔn bɛbrɛ wɔn a wɔreyɛ basabasa no. 6 Bere a wɔanhu wɔn no, wɔtwee Yason ne anuanom binom kɔmaa kurow no mu atumfoɔ, na wɔteɛteɛɛm sɛ: “Mmarima a wɔadan+ wiase ani no aba ha nso, 7 na Yason agye wɔn aba ne fie. Saa nnipa yi nyinaa sɔre tia Kaesare ahyɛde+ ka sɛ ɔhene foforo bi wɔ hɔ+ a ɔne Yesu.” 8 Nokwarem no, bere a nnipakuw no ne kurow no mu atumfoɔ tee eyinom no, wɔn ani beree; 9 afei bere a wɔmaa Yason ne wɔn a aka no dii agyinam maa wɔn no, wogyaa wɔn. 10 Anadwo+ no ara anuanom no maa Paulo ne Silas kɔɔ Beroia, na wokoduu hɔ no, wɔkɔɔ Yudafo hyiadan mu. 11 Ná eyinom wɔ adwempa sen wɔn a wɔwɔ Tesalonika no, efisɛ wɔde wɔn adwene nyinaa gyee asɛm no, na da biara na wɔhwehwɛ+ Kyerɛwnsɛm+ no mu yiye hwɛ sɛ nsɛm no te saa anaa.+ 12 Ɛnna wɔn mu pii bɛyɛɛ gyidifo, na Helafo mmea ne mmarima atitiriw+ a wɔdɔɔso pii nso yɛɛ saa. 13 Nanso bere a Yudafo a wofi Tesalonika no tee sɛ Paulo aka Onyankopɔn asɛm wɔ Beroia nso no, wɔbaa hɔ nso betutu guu ɔmanfo no asom+ hwanyan+ wɔn. 14 Ɛhɔ ara na anuanom gyaa Paulo kwan koduu po no so nohoa;+ na Silas ne Timoteo de, wɔtenaa hɔ. 15 Nanso, wɔn a wokogyaa Paulo kwan no de no koduu Atene, na bere a ɔkraa wɔn sɛ wɔnka nkyerɛ Silas ne Timoteo+ sɛ wɔmmra ne nkyɛn ntɛm so no, wofii hɔ kɔe. 16 Bere a na Paulo retwɛn wɔn wɔ Atene a ohui sɛ ahoni ahyɛ kurow no ma no, ɛyɛɛ no ahometew.+ 17 Enti ɔne Yudafo+ ne nnipa a aka a wɔsom Onyankopɔn no susuw nsɛm ho wɔ hyiadan no mu, na da biara na ɔkɔ wɔn a obenya wɔn no nso nkyɛn wɔ gua so.+ 18 Nanso Epikurofo ne Stoafo nyansapɛfo+ bi ne no dii anobaabae, na ebinom kae sɛ: “Dɛn na kasatenten wura yi pɛ sɛ ɔkyerɛ koraa yi?”+ Ebinom nso se: “Gyama ɔka ananafo anyame ho asɛm.” Efisɛ na ɔreka Yesu ne owusɔre no ho asɛmpa.+ 19 Enti wɔkyeree no de no kɔɔ Areopago asɛnnibea kae sɛ: “Wubetumi ama yɛahu nkyerɛkyerɛ foforo+ a worekyerɛkyerɛ yi mu? 20 Efisɛ woreka nsɛm bi a ɛyɛ foforo koraa wɔ yɛn asom. Enti yɛpɛ sɛ yehu nea nsɛm yi kyerɛ.”+ 21 Nokwarem no, sɛ Atenefo ne ahɔho a wɔabɛsoɛ hɔ no nya bere a, nea wɔde yɛ ara ne sɛ wɔbɛka anaa wobetie asɛm foforo. 22 Afei Paulo sɔre gyinaa Areopago+ no mfinimfini kae sɛ: “Atene mmarima, mahu sɛ ɛkame ayɛ sɛ ade nyinaa mu no mopɛ nyamesom+ sen afoforo. 23 Sɛ nhwɛso no, bere a meretwam a mehwɛɛ nneɛma a mosom no, mihuu afɔremuka bi a wɔakyerɛw ho ‘Ɛyɛ Onyame Bi a Wonnim No Dea.’ Enti nea mosom no a munnim no no, ɔno ara na mereka ne ho asɛm akyerɛ mo. 24 Onyankopɔn a ɔyɛɛ wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa no, Ɔno ne ɔsoro ne asase Wura,+ enti ɔnte asɔredan a wɔde nsa ayɛ mu,+ 25 na saa ara nso na wɔmfa nnipa nsa nsom no te sɛ nea biribi hia no,+ efisɛ ɔno na ɔma nnipa nyinaa nkwa+ ne ahome+ ne nneɛma nyinaa. 26 Na ɔyɛɛ nnipa aman+ nyinaa fii onipa biako+ mu sɛ wɔntena asase nyinaa so,+ na ɔhyɛɛ mmere too hɔ+ de ahye nso totoo nnipa tenabea,+ 27 na wɔapɛ Onyankopɔn akyi kwan,+ ahwehwɛ no denneennen kosi sɛ wobehu no,+ nanso nokwasɛm ne sɛ ɔne yɛn mu biara ntam nware. 28 Na ɛnam no so na yɛwɔ nkwa na yɛkeka yɛn ho na yɛwɔ hɔ,+ na mo mu anwensɛm akyerɛwfo+ bi mpo aka sɛ, ‘Yɛn nso yɛyɛ ne mma.’ 29 “Enti, bere a yehu sɛ yɛyɛ Onyankopɔn asefo+ no, ɛnsɛ sɛ yesusuw sɛ Tweaduampɔn+ no te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔbo, anaa adwini bi a onipa de n’adwene adi anaa wabɔ ne tirim ayɛ.+ 30 Nokwarem no, Onyankopɔn buu n’ani guu mmere a na wonnim hwee no so,+ nanso afei ɔreka akyerɛ adesamma a wɔwɔ mmaa nyinaa sɛ obiara nsakra.+ 31 Efisɛ wayi da bi asi hɔ a wabɔ ne tirim sɛ ɔnam ɔbarima bi a wapaw no so bebu asase atɛn+ wɔ trenee mu, na wanyan+ no afi awufo mu de ayɛ nnyinasode ama nnipa nyinaa.” 32 Na bere a wɔtee owusɔre ho asɛm no, ebinom fii ase dii fɛw,+ na ebinom nso kae sɛ: “Yebetie wo eyi ho bio bere foforo nso.” 33 Ɛnna Paulo fii wɔn mu kɔe, 34 nanso mmarima bi de wɔn ho bɔɔ no bɛyɛɛ gyidifo; wɔn mu binom ne Dionisio a ɔyɛ Areopago+ bagua no temmufo, ne ɔbea bi a wɔfrɛ no Damari, ne afoforo a wɔka wɔn ho.